Qaar ka mid ah wadooyinka jidcadyaasha Muqdisho oo biro lagu jaray!!
Biro dhaadheer ayaa lagu jaray Jidcadayeyaasha ku yaalla qaar ka mid ah degmooyinka Magaalada Muqdisho sidda ay Risaala u xaqiijiyeen qaar ka mid ah Darawaladda ku shaqeysta Mootooyinka ee Isticmaala Wadooyinka Muqdisho.
Dadka aan u shaqeyn dowlada ee aan heysan Aqoonsiga dowladda ayaa mari jiray Wadooyinka hadda Biraha lagu jaray, Maadaama Wadooyinka ka agdhow Xarumaha dowladda aan la marin aqoonsi dowladeeda la’aantiisa.
Ujeedada ka dambeysa in wadooyinka Magaalada Muqdisho ciidamada ammaanka ay xiraan ayaa waxaa ay tahay in la adkeeyo Ammaanka xarumaha dowladda iyo Xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir.
Gaadiidka uma suuragaleyso inay laamiga ka leexdaan, sababtoo ah dhamaan jidcadyaasha xaafadaha dhexmara ayaa lagu jaray Biro si uusan gaari u marin.
Sidoo kale ciidamada ayaa gooyay jidcadyaasha mara wadada ka timaada Isgoyska Howlwadaag ee sida tooska ah u gasha Isgoyska Sayid.
Sidoo kale gaariga Isgoyska Banaadir ka soo baxa kama leexan karo wadada illaa uu ka tago Isgoyska Tarabuunka.